Ittisa Imalaa Tiraamp: Manni Murtii Ol-aanaa ittisi kun akka guutummaatti hojiirra oolu eyyame - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Dubartiin Losaanjalas Onkoloolessa keessa hiriira #NoMuslimBanEver irratti hirmaatte alaabaa Ameerikaa mataatti uffatte
Manni Murtii Ol-aanaa Ameerikaa ittisa imalaa biyyoota caalmaan uummatni isaanii Musiliima ta'an ja'arratti Pirezidantii Donaaldi Tiraampi kaa'an akka guutummatti hojiirra ooluuf murteesseera, garuu rakkoon gama seeraan mudachuuf jiru akkuma jiruttidha.
Murteen kun imaammata Tiraamp imala biyyoota Chaadi, Iraan, Liibiyaa, Somaaleefi Yemenirraa dhowwuuf baaseef milkaa'inadha.
Murtichi qajeelfama marsaa sadaffaa pirezidaantichi erga hojii jalqabee dhiyeesserratti.
Murtee manni murtii gad-aanaa imaammaticha mormuun tursiise, abbootii haqaa sagal keessa torba ittisni kun Wixata akka kaafamu taasisaniiru.
Abbootii seeraa walabaa kan ta'an Ruut Baader Ginsibargiifi Soaniyaa Sotomaayar qofatu ittisa imalaa pirezidaantichaa akkuma dhowwametti akka hafuuuf eyyame ture.
Manneen murtii ol-iyyannoo Federaalaa Saan Firaansiiskoo, Kaalifoorniyaafi Riichmoondi Verjiniyaa, mormii imaammanni irra deebiin dhiyaate kun seera qabeessa ta'uufi dhiisuusaa torban kana keessa ilaaluuf jira.
Manni Murtii Ol-aanaa, manneen murtii kunneen akka "hiika sirrii ta'een" murteerra ga'an akka eegu ibseera.
Dhimmichi dhumarratti deebi'ee Mana Murtii Ol-aanaatti xumura argata.
Murteen gaafa Wixataa kan agarsiisu, qaamni haqaa ol aanaa Ameerikaa bifa mootummaa deggaruun murteesse isaati, jedhu xiinxaltoonni seeraa.
Yaada attamii uume?
Dubbi himaan Waayiti Hawus Hoogan Gidleey akka jettutti, Waayiti Hawusiin murtee Mana Murtii Ol aanaa kana "hin ajaa'ibsiifanne".
Gaggeessa Seeraa Ol-aanaan Ameerikaa Jeef Seshiinsi murtichi darbe "nagaafi tasgabbii uummata Ameerikaaf mo'icha cimaa" jedhan.
Yuuniyeeniin Walabummaa Namoomaa Ameerikaa (ACLU) garuu viidiyoo Biriitishi torban darbe pirezidaantichi irra deebiyee tiwiiti godhe, loogii inni Isilaamarratti qabu agarsiisa.
"Ilaalchi farrummaa Musiliimaa Tiraampi hicciitii miti - kana inniyyu isa torban darbe tiwiiteriirratti gadi dhiise dabalatee irra deebiyee mirkaneesseera," jedha abbaan seeraa ACLU Omar Jadwaat.
"Akka carraa ta'ee guutumaan dhowwuu qajeelchichaa amma gara fuulduraatti deema, garuu ajaji kun bu'aa iyyannoo keenyaa hin agarsiifne.."
Dhowwuun deemsaa Tiraampi dhiyaate?
Amma sadarkaa ta'eetti qajeelfamni pirezidaantichaa manneen murtiidhaan nuffameera:
Amajji keessa, namoonni biyyoota caalaatti Musiliima baayyatanii guyyoota 90 akka biyyattii hin seenneefi seenuu baqattootaa guutummaatti kan ittisu mallatteesse. Tarkaanfiin baqattoota Sooriyaarraa ta'anilleen osoo hin hambisiin dhowwee ture mormii kakaasee, rakkoon seeraas mudatee ture.
Garagalchi foyyaa'e Bitootessa keessa Iraaqiin tarreeffama keessaa baasee baqattoota Sooriyaarraas dhowwaa sana kaasee dhiyaate. Waxabajjii keessa Manni Murtii Ol aanaa baqqatoota hunda Ameerikaa seenan guyyaa 120f dhowwuu dabalatee guutummaatti hojiirra oole. Garuu warra Ameerikaa waliin hariiroo "wal amantaa" qaban ballinaan dhowwaa kanaa jalaa hambise.
Ajaji Tiraampi sadaffaan Fulbaana keessa ture kan beeksifame. Biyyoota uummata Musiliimaaa baayyee hin qabne akka Kooriyaa Kaabaafi Venzuweelaa kan manneen murtii gadi aanoo fudhatan dabalatee ba'e.
Mannen murtee gadi aanoo maal jedhan?
Pirezidaantiin Ameerikaa miidhaa shororkeessitoonni Paaris, London, Biraaseelsiifi Berliin keessatti geessisan akka ragaatti kaasuun dhowwuun kun nageenya biyyaaf barbaachisaa akka ta'e cimsee dubbata.
Kana mormuun garuu, abbootiin murtee federaalaa kun ibsa duula Tiraampi "Dhowwaa Musiliimaa" fi waamicha inni "Musiliimonni guutummaafi guutuutti akka Ameerikaa hin seenne cufuudha," jedhu.
Manneen murtii gadi aanoo guutummaa Ameerikaa keessa jiran imaammanni pirezidaantichaa Heera Ameerikaa jalqabaa raggaasa duraa kan walabummaa amantaa cabsa jechuun dubbatu.
Onkoloolessa keessa, abbaan seeraa federaalaa Mariilaandi akkas jedhe: "Dhowwan Musiliimaa kan jalqabaa mullinatti irra deebiyamee jecha Tiraampiin dubbatame kan humnaafi bifa amansiisuun dhimma kaayyeffate ifatti ibsedha."
abbaan murtii federaalaa Hawaahii akka jedhanitti, "haala seera hundeeffama biyya kanaa cabsee" imaammatichi, "ifatti lammummaarratti hundaa'uun kan loogii uumudha"
Viidiyoo Ani ammallee lammii Ameerikaa ta'eeraa?
Lootarii 'Green Card': Lammiilee Afrikaaf carraa hedduu argamsiise